Su'aalaha la isweydiiyo - Weydiinta Wershadaha Wershadda ee Wershadda Cas., Ltd.
Qiimaheena waxay ku xiran yihiin mashruucaaga shuruudo. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha cusboonaysiinta ka dib marka shirkaddaadu nala soo xiriirto wixii macluumaad dheeraad ah.
Maya, MOQ waa mashiin 1 set ah. Dabcan, qeybta dayactirka MOQ ma ahan 1 pc.
Haa, waxaan ku bixin karnaa shahaadada CE, shahaadada birta ah ee birta ah ee 304, liisanka ganacsiga iyo kuwa kale.
Guud ahaan, soo saarista khadka wax soo iibsiga oo dhammaystiran waa 45 maalmood. Mashiinka unugyada waa 20 maalmood. Haddii aad haysato amar deg deg ah, waad nala soo xiriiri kartaa, laga yaabee mashiinka aad u baahan tahay inuu ku jiro keydkeena.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada bangiga, TT ama LC.
15 bilood tan iyo markii la raray. Waxaan damaanad qaadeynaa qeybahayada elektiroonigga ah iyo shaqeynta. Ballan qaadkeennu waa qanacsanaanta alaabadayada. Caymis ama majiro, waa dhaqanka shirkaddayada in wax laga qabto oo la xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si loo qanco qof kasta
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Wadada hawo mareenka ayaa ugu dhakhsaha badan laakiin waliba habka ugu qaalisan. Seaway waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.